इनास सिक्कीम अवार्ड आयोजक निन्दा गर्न पनि लायक छैनन्: पत्रकारहरु « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
इनास सिक्कीम अवार्ड आयोजक निन्दा गर्न पनि लायक छैनन्: पत्रकारहरु
सिक्कीममा भएको चौथो इनास अवार्डको एक झलक ।
कार्तिक २४ गते भारतको सिक्कीममा अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजले आयोजना गरेको दुई दिन अगावै पत्रकार तथा आयोजकका केहि सदस्य साथै अन्य केहि चलचित्रकर्मी काकरभित्ता पुगेर बास बसे । नेपालबाट हवाई मार्ग हुँदै जाने झण्डै एक सय चलचित्रकर्मीको पर्खाई र भन्सार कार्यालयको एउटा कार्यक्रममा सहभागि भएर भोलीपल्ट साँझ सिक्कीम हिडे नेपाली चलचित्रकर्मीहरु ।
अनावश्यक रुपमा भन्सारमा राखिएको परिचयात्मक कार्यक्रमलाई धेरैले अस्विकार गर्दै बाहिरै थिए । त्यो समूहमा नायिका करिश्मा मानन्धर पनि थिइन् । कार्यक्रम हलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै नायक राजेश हमाल र उनकी पत्नीले परिचय दिनुपरेको थियो, जुन दृश्य अचम्मको थियो । सबै नेपालीको मनमै रहेका हमालले परिचय दिनपर्नुलाई कसरी बुझ्ने ?
सिक्कीम पुगेपछि बीच बाटोमा नै एक रिसोर्टमा सम्मान र खाना खुवाएर चलचित्रकर्मीहरुलाई गान्तोक पुर्‍याईयो । रातको करिब १ बजे तिर होटल खोज्दै तीनपटक बस घुमाएपछि बाटोमा भेटिने ट्याक्सीवालासँग सोधखोज गर्दै पत्रकारको टोली पुग्यो PNG ROAD को एक होटलमा । जहाँ बस्न भनेर गएका सबै पत्रकारलाई कोठा नै थिएनन् । एकछिनमा अर्को होटलमा पत्रकार आँफैले ब्यवस्था गरेर बसे । भोलीपल्ट भने सबै पत्रकार (करिब १६ जना) एउटै होटलमा बसे ।
होटल यस्तो थियो जहाँ इन्टरनेट थिएन । अहिलेको स्मार्ट युगमा इन्टरनेटबीना के नै सम्भव छ र ? अझ पत्रकारले त हरबखतको अपडेट राख्नुपर्छ अनि जनतासामु पुर्‍याउनु पनि पर्छ । बंगाली होटलवालाले हाम्रो कुरा बुझ्नेवाला पनि थिएन, यसको मतलब हाम्रो कुराको उसलाई कुनै वास्ता थिएन । आयोजक सम्पर्कमा थिएनन् । उनिहरु आएर समस्या बुझ्लान भन्ने आशामा नै पत्रकारको तीन दिन बितेको थियो । न खाने तालिका छ, न कार्यक्रमको तालिका छ । त्यहि समयमा भारतमा भएको ५०० र १००० का नोट बन्देजले अझै गाह्रो बनाउने पक्का थियो । आँफैले इन्टरनेट ब्यवस्था गर्न पनि पत्रकारलाई सास्ती नै भयो अझ भनौँ सम्भव नै रहेन ।
आयोजक पुरै बेखबर थियो । सम्पर्कमा कोहि आएनन् । एक जना अर्को होटलमा बसेका पत्रकारले अवार्ड कार्यक्रमको समय चार बजे भनेपछि मात्र सबैलाई थाहा भएको थियो । चार बजे भनिएको कार्यक्रम ७ बजे सुरु भयो । मध्य‍रात कटेर अर्को दिन सुरु हुँदा सम्म भईरह्यो । त्यहाँ के-के भयो सबै समाचारहरुमा छर्लंगै आईरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्: — सिक्कीममा दीपक-दीपाले सम्मान थापेनन्, करिश्माको दु:ख उस्तै
भोलीपल्ट अबेर उठेका पत्रकारलाई सिक्कीम सरकारले २०० करोडमा बनाएको चारधाम लैजाने खबर आयो । खबर आयो १० बजे । केहिलाई बिहानै लगिएको रहेछ, तर पत्रकार र केहि बाँकीलाई भने १० बजे खबर आएको रहेछ । त्यहाँ रहेका आधा पत्रकार चारधाम लागे, आधी भने होटल बाहिर कुरेको कुरेकै । लिन कोहि आएनन् । जति भ्यान आए अटेका पत्रकार त्यता लागेका थिए ।
त्यहाँ रोकिएका पत्रकारहरु सिक्कीमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ्ले दिएको पार्टीमा भेटिए । त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय कलाकार समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष पुष्प बरुवाल पनि भेटिए । बरुवालसँग ब्यवस्थापन कमजोरीको बारेका गुनासो राख्दा उनले ‘यस बारेमा मलाई केहि नभन्नुस्’ भनेपछि पत्रकारको पारो साँच्चिकै तात्यो । त्यसपछि उनले माफी माग्दै त्यतै भिडमा हराए ।
इनासका ग्लोबल अध्यक्ष पुष्प बरुवाल ।
यति गुनासो पोखेपछि भोलीपल्टको ब्यवस्थापन राम्रै होला भन्ने विश्वास पत्रकारलाई थियो, तर त्यसो भएन । पार्टी सकिने बेला नेपालतर्फी ब्यवस्थापन सदस्य सम्झना उप्रेती रौनियारले बिहान पाँच बजे नै तयार हुन आग्रह गरिन् । पत्रकार मात्र होइन सबै चलचित्रकर्मी बिहानै तयार भए ।
पत्रकारको एक टोली पनि बिहान ८ बजे नेपालतर्फ हिड्यो । सिक्कीममा बाँकी ९ पत्रकारलाई अर्को सवारी साधन लिन आउने बिस्वासले कुरिरहे । होटल चेकआउट सकियो । होटलको गेटमा ९ पत्रकारले कुरिरहे, मात्र कुरिरहे । लिन कुनै बस आएन । बिहान फोन आएको एउटा नम्बरमा सम्पर्क गर्दा १५ मिनेटमा बस आउने जानकारी आयो तर, १२ बजेसम्म आएको थिएन । सम्पर्क गर्दा दशौँ पटक सम्म फोन उठेन । अनि ९ जनाको टोली आफैले ब्यवस्था गरी नेपाल फर्कियो ।
बाटोमा एउटा फोन आयो, जुन फोन पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेपछि आएको थियो । करिब १ बजे फोन आउँदा टोलीले आधा घण्टाको बाटो कटिसकेको थियो । उक्त फोनमा किन पर्खिनुभएन भनेर उल्टै प्रश्न आएको थियो । काठमाण्डौ सम्म नै टोली आँफै फर्कियो । आँफै फर्किनेहरुमा पत्रकार मात्र होइन, चर्चित कलाकारहरु तथा बरिष्ठ फिल्मकर्मी पनि रहेछन् । यो कुरा काठमाण्डौमा थाहा भयो । आयोजले केहिलाई थोत्रा गाडीमा फर्काएछ भने केहि लाई जहाजमा नै ल्याएछ ।
यस बिषयमा हामीले केहि पत्रकारसँग कुरा गरेका छौँ जो सिक्कीम पुगेका थिए ।
सामिप्य तिमिल्सिना (नागरिक दैनिक):
यति झुर व्यबस्थापन कहिँ कसैले पनि गर्दैन । मेरो गुनासो सिक्कीमका ब्यवस्थापक सँग पनि छ । उनिहरुले पनि नेपालबाट गएका पाहुनालाई ब्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्यो । खाने-बस्ने-हिड्ने तालिका ब्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । यताका आयोजक त निन्दा गर्न पनि लायक छैनन् । त्यसै त नेपालमा किन, के का लागी र कस्ताले अवार्ड पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसमाथी यो घटनाले झन सशंकित बनाएको छ ।
विजय आवाज (अनलाईन खबर डटकम):
व्यवस्थापन गर्न सकिदैन भने अवार्ड विदेशमा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । सिक्किम अवार्डको मुख्य समस्या नै यहि थियो । यो नियतवस भयो या नजानेर भयो यो बिषयमा आयोजकले मुख खोल्नुपर्छ ।
नेमिश गौतम (हिमालयन टाईम्स – नेपाली):
आयोजकको लापरवाहीले सिक्किममा पीडा भोगियो, यस्तो पीडा आगामी दिनमा हुने अन्य अवार्डमा कसैले पनि नभोगुन् ।
सुशिल पौडेल (कान्तिपुर दैनिक):
इनास अवार्ड आयोजकको खराब ब्यबस्थापनले गर्दा समस्या आयो । कलाकारले के खाए ? कहँ कसरी बसेका छन् भन्ने न्यूनतम जानकारी समेत आयोजकले राख्न चाहेन । पत्रकारले समाचार पठाउन कठिनाई भोग्नुपर्यो । लगिएका अतिथिलाई सही ढंगले फर्काएको पाईएन ।
जिवन पराजुली (ठुलोपर्दा डटकम):
अतिथीको मुल्य न नेपाली आयोजकले जान्यो न त सिक्कीमको आयोजकले नै । पत्रकार होस् या कलाकार अथवा प्राविधिक, सबैले सहि सत्कार र ब्यवस्थापन पाउनु पर्छ । सिक्कीमको इनास अवार्ड आयोजक प्रति खेद छ । अझै धेरै सिकेर मात्र यस्ता आयोजनाहरुमा हात हालेको राम्रो । ग्लोबल अध्यक्षले ‘मलाई यस बारेमा नभन्नुस्’ भन्नुले उनिहरुको बौद्दिकता प्रस्टै भएको छ ।
गोकर्ण गौतम (नेपाल साप्ताहिक):
यसरी विदेशमा अवार्ड गर्नुपूर्व कसले र किन गर्दैछ भन्ने ख्याल मूख्य आयोजकले गर्नुपर्‍यो । नेपालको आयोजकबाट पनि कलाकार-पत्रकारलाई अपमानित गरियो । सिक्कीममा पनि त्यहाँको ब्यवस्थापनले अतिथी ब्यवस्थापनमा शुन्य काम गरेको छ ।
कमल प्रसाईँ (अनलाइनखबर डटकम):
ब्यवस्थापन होइन, बेवास्तापन हो यो । यिनिहरुको कारण अन्य नेपाली अवार्ड आयोजकहरुमा जून कालो धब्बा लागेको छ त्यसप्रति सबैको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ र नेपाली चलचित्र सँग संबन्धित निकायले यस्ता ‘कु नमूना’लाई कारवाही गरोस्, कलाकारलाइ निरुत्साहित हुनबाट बचाओस् ।